Ọha bụ nsogbu, ọ bụghị mgbasa ozi | Martech Zone
Nyaahụ, anụrụ m nnukwu akụkọ banyere ndị enyi na ndị iro. Akụkọ ahụ bụ banyere otu esi esiri ike ịme enyi karịa onye iro. Enwere ike ịme onye-iro n’obere oge, mana ọtụtụ mgbe ọbụbụenyi anyị were ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọtụtụ afọ iji mepụta. Ka ị na-ele anya na mgbasa ozi mmekọrịta, nke a bụkwa esemokwu… gị ma ọ bụ azụmaahịa gị nwere ike ịme ihe dị mfe dịka izipu akụkọ ọjọọ na Internetntanetị ga-amalite ịkpọasị. Ndị iro juru.
N'otu oge ahụ, atụmatụ gị iji nye ndị na-azụ ahịa ihe eji azaghachi ma nye ha uru ha nwere ike were ọnwa, ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ afọ, tupu onye na-azụ ahịa enwee ekele maka uru na ikike sitere na mbọ mgbasa ozi gị. N’ezie, mgbalị gị nwere ike ghara ịghọ ọbụbụenyi ka ị tụrụ anya ya.
O siri ike imeta enyi karịa onye iro.
Akụkọ ahụ abụghị banyere ịntanetị… ọ bụ n'ezie site na akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Anaghị m ekwu na iji kwalite echiche ọ bụla, naanị ịkọwa na nsogbu a amaliteghị na mgbasa ozi mgbasa ozi. Nsogbu a bu banyere omume mmadu, obughi site na ndi ozo. Mgbasa mgbasa ozi na-enye ọha na eze ebe anyị na-ahụ okwu ndị a.
Ka m na ekiri ndị Interwebs na-awakpo ndị ọzọ ama ama, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ụlọ ọrụ, a na m eche ihe usoro mgbasa ozi mmekọrịta dị mma ga-adị n'ọdịnihu. Ndị kwusara onwe ha gurus na-ekwupụta nghọta na ịchọ ka ndị mmadụ, ndị isi na ụlọ ọrụ anyị na-agbaso dị n'ịntanetị… wee mesịa mee ka ha daa n'isi mgbe ha mejọrọ. Abamuru ya ọ ga-aga n'ihu karịa ịkwụ ụgwọ ya?
Ọfọn… na ndụ anyị na-emekwa ndị iro mfe… mana ọ naghị egbochi anyị itinye oge iji mee ka ezigbo ọbụbụenyi dị ndụ. Ọ nwere ike ịdị mfe ịme onye iro karịa enyi, mana abamuru nke ọbụbụenyi karịrị ihe egwu ọ bụla nke ịmepụta onye iro.
Jul 1, 2013 na 9: 45 AM
Isiokwu na-akpali mmasị ma isiokwu anaghị enye nkwupụta echiche ọ bụla dị ka azịza. Ma ịkwalite okwu a dị mma n'onwe ya. Tnx
Jul 1, 2013 na 11: 20 AM
Enweghị m ngwọta - mana m na-atụ anya ịhụ otu ụlọ ọrụ si edozi usoro mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ otu ndị ahịa si emeghachi omume na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka oge na-aga.